Ururada Haweenka Galgaduud oo cambaareeyay Duqeynta Diyaaradaha Kenya – SBC
Ururada Haweenka Galgaduud oo cambaareeyay Duqeynta Diyaaradaha Kenya
Ururada Haweenka ka howlgala qeybo kamid ah gobolada Dhexe Gaar ahaan Gobolka Galgaduud ayaa ka hadlay duqeynta Dowlada Kenya ay ka geysatay qeybo ka mid ah Dalka kaas oo ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah oo aad u tirobadan.
Xaawa Cabdulle Bare oo ka mid ah Masuuliyiinta ururada Haweenka ee ka howlgala Gobolka Galagaduud ayaa sheegtay in Dowlada Kenya ay baa bi’in ku wado Umada Soomaaliyed islamarkaana ay ugu baaqeyso in umada Soomaaliyeed ay ka joojiso leynta ayna waxyaabaha ay geysaneyso noqonayaan mid ay taariikhdu qureyso.
Waxay shegtay in markii ay dowlada Kenya Bilowday duqeynta diyaaradaha ah ee ay u geysaneyso dadka soomaaliyed ay dadkii baa be’een islaamarkaana ay noqdeen kuwo ay leyso bamka diyaaradaha ay tuurayaan iyo kuwo ay laayaan Xeywaanaadka Duurka ku jira ka dib markii ay barabexeen.
Waxaa sidookale ay ugu baaqday Dowlada KMG ah in ay ka hadlaan dhibaateynta shacabka loo geysanayo, oo ay u muujiyaan waxyaabihii loo doortay masuuliyiinta xukuumada ee aheyd in ay u adeegaan umada Soomaaliyeed, kana hortagaan wixii xumaan u geysanaya,.
Sikastaba ha ahaatee Hadalka Ururada Hawenka aya waxa ay ku soo aadayaan xili maalmo ka hor un ay aheyd markii diyaaradaha dagaalka Dalka kenya ay weerar ay la damacsanaayeen fariisimada xarakada alshabaab ay la eegteen dad rayid ah oo ku sugnaa deegaanka hoosingow .